Wararka - Waa maxay guddiga malaasyada gypsum?
Looxyada balastarka gypsum ee lagu soo saaray baaxadda adduunka waxaa inta badan ka mid ah: guddiga gypsum-ka ee warqadaha la wajahayo, guddiga gypsum-ka aan warqadda lahayn, guddiga gypsum-ka lagu qurxiyo, guddiga gypsum-ka fiber-ka, guddiga loo yaqaan 'gypsum sound-absorb', iwm.
(1) Xaashida wejiga loo yaqaan 'gypsum board'. Guddiga gypsum-ka ee wajiga ku duuban ayaa ah nooc ka mid ah guddiga miisaanka culus ee ka samaysan isugeynta 'gypsum slurry' sida xudunta iyo warqadda labada dhinacba ilaalin ahaan. Guddiga gypsum-ka ee warqadaha ku qorani waa kuwo khafiif ah, xoog badan, dab-damis ah, aboor-laawe, oo si fudud loo farsameeyo. Guddiga caadiga ah ee loo yaqaan 'gypsum board' ayaa loo adeegsadaa derbiyada gudaha, derbiyada kala-soocidda iyo saqafyada la laalay. Guddiga gypsum-ka ee u adkaysta dabka ayaa loo isticmaali karaa darbiyada qolalka leh qoyaan badan, sida taayirrada, saxannada biraha, iyo dahaarka caagga ah ee musqulaha, jikada, musqulaha, iwm. Gypsum board waa qalab ka samaysan dhismaha gypsum sida alaabta ceeriin ee ugu weyn. Waa nooc ka mid ah qalabka dhismaha ee cagaaran oo leh miisaan fudud, xoog sare, dhumuc khafiif ah, farsamayn habboon, kuleyliyaha codka, kuleylka kuleylka, iyo waxqabadka dabka. Waa mid ka mid ah boodhadhka miisaanka yar-yar ee hadda la horumarinayo. Waxayna noqon kartaa geeddi-socod dheeri ah inay ahaato saqafka kore iyadoo lagu daboolayo filimka wax lagu qurxiyo ee PVC loona jarjaray qaybo yaryar.
(2) Kombiyuutarada aan waraaqda lahayn ee loo yaqaan 'gypsum board' waa nooc ka mid ah loox wax qabadkiisu sarreeyo, kaas oo beddelaya looxa looxa. Waa nooc cusub oo ka mid ah guddiga dhismaha oo leh Beta gypsum stucco oo ah maaddada ugu weyn iyo fiilooyinka kala duwan sida qalabka xoojinta. Waa badeecad kale oo cusub oo si guul leh loo soo saaray ka dib markii si ballaadhan loo isticmaalay shaashadda. Sababtoo ah warqadda ka ilaalinta dusha sare waa laga tegey, baaxadda dalabku ma aha oo keliya inay daboosho dhammaan codsiyada kala duwan ee guddiga balastarka wajahaya warqadda, laakiin sidoo kale waa la ballaariyay, waxqabadkeeduna dhammaystiran yahay ayaa ka wanaagsan kan guddiga warqadda wajahadda ah, hase yeeshe, awooddiisu way yar tahay.
(3) Qalabka loo yaqaan 'gypsum board'. Guddiga gypsum-ka qurxinta wuxuu ka samaysan yahay dhismaha 'gypsum' oo ah alaabta ceyriinka ah ee ugu weyn, oo lagu qasay qadar yar oo ah waxyaabaha fiber, iwm, oo leh qaabab kala duwan iyo qurxinta ubaxa, sida guddiga daabacaadda gypsum, guddiga saqafka dillaacsan, guddiga sare ee saqafka gargaarka, warqad-wajiga gypsum qurxinta guddiga Sug. Waa nooc cusub oo ah walxaha qurxinta ee gudaha, oo ku habboon qurxinta dhexdhexaadka iyo heerka sare, waxayna leedahay astaamaha miisaanka fudud, u adkaysiga dabka, u adkaysiga qoyaanka, ka shaqaynta fudud, iyo rakibidda fudud. Gaar ahaan, dusha sare ee nuuradda nooc-cusub ee loo yaqaan 'gypsum board' oo biyo-xireenka ah ayaa lagu daboolay cusbi, qaabka ku-dayashada qurxinta ayaa u muuqda, ugub iyo deeqsi. Guddigu wuxuu leeyahay awood sare, iska caabbinta wasakhda, iyo nadiifin sahlan. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu qurxiyo darbiyada lagana dhigo derbiyo. Looxyada iyo looxyadu waa qalab ku habboon in lagu beddelo dhagaxda dabiiciga ah iyo terrazzo.
Waqtiga boostada: May-18-2021